MW CMC Oo Hadiyado Gudoonsiiyay Martidii Kulan-waynuhu Usocday - Cakaara News
MW CMC Oo Hadiyado Gudoonsiiyay Martidii Kulan-waynuhu Usocday
Jigjiga(Cakaaranews) Jamce, 22ka July 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka kaqaybgalay gabagabadii kulanwaynaha wadatashiga afhayeenada iyo afhayeen kuxigeenada golayaasha wakiilada shacabka iyo kuwa federeshinka dawlad deegaanada iyo ismaamulada dalku kakooban yahay oo mudo laba maalmood ah xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga kasocday.
Waxaana kahor soo xidhitaankii kulanwaynaha afhayeenada iyo afhayeen kuxigeenada golayaasha tababar kusaabsan ilaalinta deegaanka siiyay wasiirka wasaarada ilaalinta deegaanka, horumarinta kaymaha iyo isbadalka cimilada JDFI Dr. Shiferaw Teklemariam.
Kadibna, waxaa kulanwaynaha soo xidhay afhayeenka golaha wakiilada shacabka JDFI mudane Abadula Gemeda oo uu weheliyo afhayeenka golaha federeshinka dalka mudane Yallaw Abate oo wakiilada golayaasha kuladardaarmay inay sii laba-jibaaraan dadaaladii dabagalada, kobcinta iyo qiimaynta qorshayaasha waxqabadka hay’adaha dawliga ah. Waxayna si balaadhan uga mahadceliyeen soo dhawayntii diiranayd ee loo soo sameeyay oo ay kutilmaameen mid kutusinaysa inuu horumar deegaanka kahanaqaaday islamarkaana shacabka deegaanku yahay mid kutashaday horumar oo ay kago’an tahay wadaniyadu kuna caan baxay martigalinta. Waxaa intaa dheer oo mas’uuliyiintu carabka kudhufteen iyagoo tusaale usoo qaatay warbixintii uu raisal wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn uu kasoo jeediyay kalfadhigii golaha xildhibaanada dalka ee udanbeeyay ee gaar ahaan taabanaysay horumarka deegaanka inuu yahay markhaati madoonto oo ay indhahooda kuxaqiijiyeen.
Hadaba, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa martidii kulanwaynaha gudoonsiiyay hadiyado katurjumaya dhaqanka soo jireenka ah ee qaab labiska shacab-waynaha deegaanka rag iyo dumar isagoo faah-faahin kabixiyay labiska dumarka oo ah xijaab balse aanaan dhaqan ulahayn naqaamka.
Ugudanbayna, afhayeenada iyo afhayeen kuxigeenada golayaasha oo dareenka shucuurtooda kahadlay ayaa sheegay inay ubogeen dhaqanka marti soorka iyo soo dhawaynta diiran leh ee shacabka deegaanka soomaalida iyagoo si wayn uga mahadceliyay islamarkaana qiray horumarka bilicdasan ee deegaanka kahirgalay oo ay sheegeen inuusan 8sano kahor kajirin.